I-Beijing ivimbela zonke izindiza ezincane ekundizeni phezu kwama-Winter Olympics
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-China Breaking News » I-Beijing ivimbela zonke izindiza ezincane ekundizeni phezu kwama-Winter Olympics
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-China Breaking News • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Sports • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Ukuvinjelwa kuvimbela ukusebenza kwazo zonke izikebhe ezindizayo ezincane ezihamba ngesivinini esiphansi futhi zisetshenziselwe ezemidlalo, ukukhangisa, ukuzijabulisa, njll.
Izikhulu zedolobha laseBeijing zimemezele ukuvalwa kwesikhashana kwazo zonke izindiza ezincane ezisemkhathini wenhloko-dolobha yaseChina.
Ukuvinjelwa okuphelele kokusebenza kwazo zonke izikebhe ezindizayo ezincane endaweni yendiza Beijing kanye nendawo kamasipala eyakhelene yashaywa ngaphambi kwe 2022 Amageyimu Wasebusika Wama-Olympic e-China futhi izosebenza phakathi kukaJanuwari 28 no-March 13.
Ngokuvumelana nesilinganiso esimenyezelwe, BeijingIzakhamuzi nezihambeli ngeke zivunyelwe ukusebenzisa ama-drones, ukwethula amabhaluni, ama-hang-glider endizayo, nokunye okunjalo. Uma lokhu kuvinjelwa kwephulwa, izinhlawulo zokuphatha nezinye zizophoqelelwa.
The 2022 Amageyimu Wasebusika Wama-Olympic enhlokodolobha yaseShayina Beijing ihlelelwe ukuthi ibanjwe kusukela ngoFebhuwari 4-20, kanti iParalympic Winter Games izoba ngoMashi 4-13.
Ngesikhathi seseshini ye-128 ye-IOC e-Kuala Lumpur ngoJulayi 31, 2015, Beijing uqokwe ukusingatha i 2022 Winter Olympic and Paralympic Games okwenza inhloko-dolobha yaseShayina ibe idolobha lokuqala elake laphatha imidlalo yama-Olympics ehlobo kanye ne-Paralympic Games (ngo-2008) kanye neMidlalo Yama-Olympic Yasebusika kanye Nemidlalo Yama-Paralympic (ngo-2022).
I-Beijing iwine ilungelo lokusingatha imidlalo 2022 Olympics kanye Paralympics emjahweni oqinile, ehlula i-Almaty yaseKazakhstan ngo-2015, ngokuthola amavoti angama-44 ngokumelene nezimbangi zayo ezingama-40.